दिल्लीका लागि नियमित हवाई उडान सूचारु Global TV Nepal
बुधबार, जेष्ठ ११, २०७९ Wednesday 25th May 2022
झापामा किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ प्रदेश र संघीय चुनावको तयारीमा जुट्न गगन थापाको आग्रह चिनीमा लगायो भारतले निर्यात प्रतिबन्ध आयल निगम घेराउ गर्‍यो नेविसंघले पर्वत जिल्ला तरुण दल अध्यक्ष तोरण मल्ल पैयु गाउपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित बसको ठक्करबाट प्रहरीसहित २ जनाको मृत्यु बढ्यो राष्ट्रिय क्रिकेटरको पारिश्रमिक प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
दिल्लीका लागि नियमित हवाई उडान सूचारु
ग्लोवल टि.भी. बिहिबार, पुस २, २०७७ 0
आजबाट भारतको राजधानी दिल्लीका लागि काठमाडौंबाट नियमित हवाई उडान सूचारु भएको छ । सरकारले ११ चैतपछि देशव्यापी लकडाउन र हवाई उडानमाथि प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि बन्द भएको यो रुटमा आज नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले पहिलो उडान र्गने भएको छ ।
ए–३२० जहाजको उडान सवा ११ः२० बजेका लागि निर्धारित रहेको नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘दिल्ली जाँदा र आउँदा दुबै उडानमा राम्रो अक्कुपेन्सी छ,’ उनले भनिन्, ‘यात्रु संख्या भने विमानस्थलबाट आइसकेको छैन ।’
नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार काठमाडौंबाट दैनिक एक जहाज दिल्ली जाने छ । सो जहाजले दिल्लीबाट यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउने छ । भारतले एयर ट्रान्सपोर्ट बबल स्कीममार्फत हवाई उडान खुकुलो बनाएको छ ।
नेपाल सरकारले समेत सोही स्कीम स्वीकार गरेपछि भारतसँगको उडान खुलेको हो । यात्रुको चापसँगै ठूलो जहाज उडाउने तयारी निगमको छ । यस रुटमा १० चैतयता नियमित उडान हुन सकेको छैन । सरकारले गत भदौबाट अन्तराष्ट्रिय उडान खुला गरेपनि भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि भने अनुमति दिइएको थिएन ।
नेपाल र भारतबीच दैनिक एकरएक वायुसेवाबाट उडान गर्ने सहमति बनेको छ ।
यसअनुसार भारतबाट एयर इण्डियाले नेपालमा उडान गर्नेछ । उक्त कम्पनीले भने उडान मिति तोकिसकेको छैन । खुलेको उडानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी तोकिएका मापदण्ड भने यात्रुले पुरा गर्नुपर्ने भएको छ । भारत जाँदा अधिकतम ७२ घण्टा भित्रको पिसिआर रिर्पोट अनिवार्य गरिएको छ ।
भारतबाट नेपाल आउने यात्रुले अनलाइन फारम भरी आवश्यक कागजात पेश गरेपछि नेपाल आउने अनुमति पाउने छन् । नेपाल र भारतबीच आवतजावतमा भिसा भने अनिवार्य छैन ।
चिनीमा लगायो भारतले निर्यात प्रतिबन्ध
आयल निगम घेराउ गर्‍यो नेविसंघले
बढ्यो राष्ट्रिय क्रिकेटरको पारिश्रमिक
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
नबिल बैंकको सीईओमा ढुंगानाको ‘इन्ट्री’, अनिल शाह बाहिरिने
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिन बामदेव गौतमको सुझाव (अन्तरवार्ता सहित)
नेपालमा कोरोनाबाट २६ पत्रकारले गुमाए ज्यान
हैदरावादलाई हराएसंगै दिल्ली फाइनलमा, उपाधिका लागि मुम्बइसंग भिड्ने
कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा माग्दै स्थानीय विकास परिषद्का कर्मचारीबाट तालाबन्दी
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आइतबार बस्दै
सोनाक्षीले गरेकी हुन् त इन्गेज्मेन्ट ?
झापामा किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
प्रदेश र संघीय चुनावको तयारीमा जुट्न गगन थापाको आग्रह
पर्वत जिल्ला तरुण दल अध्यक्ष तोरण मल्ल पैयु गाउपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित
बसको ठक्करबाट प्रहरीसहित २ जनाको मृत्यु